अर्थ – Education Awardees
भत्ता र रोजगारी दिलाउने विधेयक ! १६ भाद्र २०७५, शनिबार १२:२२
काठमाडौँ, १६ भदौ । नारायण न्यौपाने रोजगारीका लागि ४० लाख युवा कतारलगायतका खाडी मुलुकमा कठिन श्रम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो..
सत्र करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दै एकेडेमी ११ भाद्र २०७५, सोमबार २०:४३
काठमाडौँ, ११ भदौ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले गत वर्षको भन्दा रु एक करोडको बजेट वृद्धि गरी यस वर्षको बजेट र कार्यक्रम तयार गरेको छ । प्रतिष्ठानको मङ्गलबार बस्ने ३३औँ प्राज्ञसभामा नेपालका भाषा, साहित्यको विकास तथा राष्ट्रिय एवं..
प्रतिष्पर्धा गरेरै बैंक अगाडी बढ्दै छ , सिइओ १० भाद्र २०७५, आईतवार १९:५९
काठमाडौँ, १० भदौ । सरकारी स्वामित्वको कृषि बिकास बैंकले गत आवमा तीन अर्ब ६७ करोड ३२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। निजीक्षेत्रका बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्दै बैंकले अहिलेसम्म कै उच्च नाफा हासिल गर्न सफल भएको छ। बैंकमा आएको व्यापक..
‘सरकारले अनावश्यक कर बढायो’ ३ भाद्र २०७५, आईतवार २१:२१
बैतडी, ३ भदौ । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले अनावश्यकरुपमा कर बढाएको बताउनुभएको छ । पूर्वमन्त्री विश्वकर्माले सरकारको नेतृत्व गरेको दलले निर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप..
सूचक घट्यो, कारोबार बढ्यो २२ श्रावण २०७५, मंगलवार १९:५६
काठमाडौँ, २२ साउन । शेयर बजार आज पनि सामान्य अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.४६ बिन्दुले घटेर एक हजार १८८ बिन्दुमा झरेको छ । क वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.२६ बिन्दुले..
निर्माणाधीन किरात राई सङ्ग्रहालयलाई दुई लाख सहयोग ६ श्रावण २०७५, आईतवार १८:२२
काठमाडौं, ६ साउन । खोटाङको ऐंसेलुखर्कस्थित रिब्जुङमा निर्माणाधीन किरात राई सङ्ग्रहालयलाई किरातीम्मा गायन समुहले रु. दुई लाख नगद सहयोग गरेका छन् । कोटेश्वरस्थित किरात राई यायोक्खाको कार्यालयमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा निर्माण समितिका..
आजदेखि अनलाईन ट्रेडिङ सुरु १ श्रावण २०७५, मंगलवार ०८:१२
काठमाडाैँ, १ साउन । आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को पहिलो दिनदेखि सेयर बजारमा अनलाईन कारोवार सुरु हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको योजनाअनुसार साउन १ गतेदेखि अनलाई कारोवार परीक्षण रुपमा सुरु हुने भएको हो । सोही अनुसार सबै ब्रोकरले अनलाईन कारोवार..
प्रदेश न ४ को सरकारले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा पर्वत ले के पायाे ! ३ असार २०७५, आईतवार २०:१०
पर्वत, २ जेठ । प्रदेश न ४ को प्रदेश सरकारले शुक्रवार आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २४ अर्व २ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ६ अर्ब ९१..
एकै दिन डेढ करोडको कारोबार २५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०८:४८
काठमाडाैँ, २५ जेठ । जिल्लाको बुकीमा यार्चा सकलनसँगै विक्री पनि शुरु भएको छ । यस सिजनमा पहिलोपटक बिहीबार हेलिकप्टर लिएर यार्चा खरिद गर्न व्यापारी आएका छन् । ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गरी आएका भीमबहादुर ओली, राजन भट्ट र पंकज..
अल्लोबाट आत्मनिर्भर बन्दै पर्वतमा महिला १३ जेष्ठ २०७५, आईतवार १८:१४
पर्वत १३ जेठ । लेकाली सामुदायिक वनका चाल्ने सिस्नो (अल्लो) प्रशोधन गरेर यहाँका महिलाले आय आर्जन गर्न थालेका छन् । उत्तरी पर्वतको जलजला–६ शालिजाका जसमाया पुनले शुरु गरेको अल्लो प्रशोधन उद्योगबाट मात्रै हिजोआज ५० महिलालाई जीविकोपार्जनमा सहयोग..